Golden Rules for Living | The World of Pinkgold
မောင်ပြုံး on June 29, 2009 at 4:28 am said:
ကောင်းတယ်ဗျ.. အခုမှ ပထမဆုံးလာဖူးတာပဲ ဟီး
ုkom on June 29, 2009 at 4:34 am said:
M Mimi on June 29, 2009 at 4:52 am said:
pink – that’s so true and real in everyday living.. sometimes good to be reminded what you already know. Because even simple thing, we as humans tend to not practice what we know..that’s how humans are… mostly.. 🙂
cuttiepinkgold on June 29, 2009 at 4:58 am said:
ွှThanks you all for your valuable comments.
အိမ် on June 29, 2009 at 1:41 pm said:
သူများ အဆိုအမိန့်တွေချည်းပြောနေတယ်၊ ကိုယ့်အဆိုအမိန့်လေးဘာလေး လုပ်ပါဦး သိချင်လို့ပါ။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ on July 6, 2009 at 5:53 pm said:
မရိုးနိုင်တဲ့ ဆုံးမ စကားတွေကို ဝေမျှတာကျေးဇူးပါ ပင့်ဂိုလ်းရေ..